တိုက်ရိုက်လွှဲပြောင်း Talk ကို: Zaha 100 M က£မှ PSG အသင်းစျေးမှာလွှဲပြောင်း၏အစီအစဉ် - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » အားကစားများ "တိုက်ရိုက်လွှဲပြောင်း Talk ကို: 100 သန်း£မှ PSG အသင်းစျေးမှာလွှဲပြောင်း Zaha ၏အစီအစဉ်
ပရီးမီးယားလိဂ်အတွက်လွှဲပြောင်းဝင်းဒိုးကိုပိတ်လိုက်ပေမယ့်ဥရောပ၏ကျန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ပွင့်လင်းဖြစ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပွငျကဇန်နဝါရီလစောင့်သိပ်နောက်ကျဘယ်တော့မှပါ! ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ နောက်ဆုံးပေါ်လွှဲပြောင်းဖော်ပြရန် အောက်တွင်နောက်ဆုံးပေါ်အတင်းအဖျင်းများရင်ပေါင်တန်းနိုင်ရန်စောင့်ရှောက်လော့။
TOP အတ္ထုပ္ပတ္တိ: Zaha ဆန့်ကျင် PSG အသင်းနှိုးဆော်သံနေမာကိုအစားထိုး
ပဲရစ်စိန့်ဂျာမိန်းခရစ္စတယ်တောင်ပံကစားသမားတစ်စျေးမှာလေလံဖွင့်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ် Wilfried Zaha non-တည်ငြိမ်ဘရာဇီးကြယ်ပွင့်များ၏အလားအလာအစားထိုးအဖြစ် 26 နှစ်ပေါင်းလုလင်ဖော်ထုတ်သောပြင်သစ်ဘက်မှာ နေမာ selon le ကြည့်မှန် .
ဥရောပအပြောင်းအရွှေ့ပြတင်းပေါက်တစ်ပါတ်အကြာအတွက်ပိတ်စဉ်အခါ, Parisian 100 လင်းယုန်သန်းပေါင်တစ်အထုပ်အတူနန်းတော်နှင့်အတူသဘောတူညီမှုဆွေးနွေးရန်လန်ဒန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုပေးပို့ဖို့ပြင်ဆင်နေကြသည်။
သူတို့နေမာလုနီးပါးအစားထိုးလို့မရတဲ့ကြောင်းဝန်ခံသော်လည်း, သောမတ်စ် Tuchel အဖွဲ့ဝင်များ Zaha နေမာစပိန်ဘီလူးကြီးဘာစီလိုနာနှင့်ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်နှင့်အတူပြင်သစ်မြို့တော် left လျှင်ဆုံးရှုံးမယ်လို့စတိုင်နှင့်အသွင်ပေးရန်စံပြကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်ပါတယ်။ 27 နှစ်ပေါင်း ld သည်။
Zaha ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အပြင်ချန်ပီယံလိဂ်ဂျူဗင်တပ်၏တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် 1 စိတ်ဝင်စားရှိနေဆဲ Paulo Dybala .
09.00 BST: Keylor Navas ယခုနှစ်နွေရာသီတွင်ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်ထားခဲ့ပါနှင့်ကလပ်တစ်ဦးကိုအစားထိုးလိုအပျသငျ့သညျ။ သူတို့ကချယ်လ်ဆီးဝါရင့်, ဝီလီ Caballero ဆက်စပ်နှင့်ယခုဒတျချြဂိုးသမား 36 နှစ်ပေါင်းအဲဗာတန်ပြီ Maarten Stekelenburg ပစ်မှတ်ဖြစ်၏ဟုဆိုလျက်, ဘောလုံးပြိုင်ပွဲအတွင်း။
] Craig Burley နဲ့ Steve Nicole အဘယ်ကြောင့်ထိုကဲ့သို့သော Crystal Palace အဖြစ်အသင်းများကိုမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဆန့်ကျင်မကွောကျယခုရာသီပြသနိုင်ဖို့ဆက်လက်။
စက္ကူစကားပြော (ဂျိမ်းစ် Capps)
မန်ယူကထုတ်တဲ့ Maddison ဖို့လှုံ့ဆျော
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအပြီးတွင် Leicester စီးတီးအပေါ်အခြားဝင်ရောက်စီးနင်းကြံစည် ဟယ်ရီ Maguire စိတ်ဝင်စားနေသောသရဲနီတို့နှင့်အတူ ဂျိမ်းစ်ကထုတ်တဲ့ Maddison selon le ကြည့်မှန် .
ပြန်ကြားရေးက Leicester Maguire ၏တစ်အလားတူစျေးနှုန်းနှင့်အတူနွေရာသီမတိုင်မီလေးနက်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုစတင်မဖြစ်နိုင်ပေမယ့်ယူနိုက်တက်, ဇန်နဝါရီလကွင်းလယ်လူ 22 နှစ်ပေါင်းတစ်ဦးကနဦးစုံစမ်းလုပ်ဆောင်သွားရန်လိမ့်မည်ဟုဆိုကြသည်။
Norwich City, နှင့်အတူတစ်ဦးဟာအဲဒီအ 20 သန်းစာချုပ်များအတွက်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကထက် Brendan Rodgers နှင့်အတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သူကထုတ်တဲ့ Maddison များအတွက်ကြီးမားတဲ့အမြတ်အစွန်းကိုကိုယ်စားပြုသည်။
ကထုတ်တဲ့ Maddison တန်ဖိုးပုံဘူလ်ဂေးရီးယားနှင့်ကိုဆိုဗိုဆန့်ကျင်ယူရို 2020 များအတွက်ခြေစစ်ပွဲများအတွက်သူ့ရဲ့နောက်ထပ်အင်္ဂလိပ်အသင်းအတွက် playmaker ဂါရတ် Southgate နှင့်တကွ, လာမယ့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းတိုးမြှင့်ဖို့မျှော်လင့်ရသည်။
နာပိုလီ Llorente ဖမ်းမိဖို့ယှဉ်ပြိုင်အနိုင်ရသင့်တယ်
နာပိုလီစီးရီးအေ, Fiorentina နှင့်ပရီးမီးယားလိဂ်၏ကုမ္ပဏီကြီးများ, မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အေးဂျင့်ရှိသူ၏ပြိုင်ဘက်ကိုအနိုင်ယူသင့်တယ် ဖာနန်ဒို Llorente အစီရင်ခံစာများ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ .
သို့သော်ယခု Llorente နာပိုလီ Carlo Ancelotti ပြောင်းရွှေ့ဖို့အကြောင်းကြောင်းယုံကြည်ရသည် - PSV တောင်ပံကစားသမား၏လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲပြီးစီးခဲ့တဲ့သူ Hirving ဝီလိုဇာနို  5] သောကြာနေ့။
Llorente, 34 နှစ်ပေါင်းသူနှစ်ဦးကိုလိဂ်ခေါင်းစဉ်အနိုင်ရနှင့် 23 66 နှစ်ဦးစလုံးအမျိုးသားရေးအဖွဲ့များသွင်းယူဘယ်မှာဂျူဗင်တပ်စ်မှာနှစ်ခုအောင်မြင်သောနှစ်ပေါင်းအတူစမ်းသပ်မှုတစ်ဦးကတစ်ဦးစီးရီးဝယ်ယူခဲ့သည်။
19659003] - တူရကီကုမ္ပဏီကြီးဂါလာတာအာဆင်နယ်အပယ်ခံလက်မှတ်ထိုးရန်နောက်ဆုံးကြိုးစားမှုလက်မှတ်ထိုးပါလိမ့်မယ် မိုဟာမက် Elneny ။ အာဆင်နယ်နည်းပြ Unai Emery သူကိုထားခဲ့ဖို့အခမဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်အီဂျစ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြောသည်ဒါပေမယ့်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှု ကြည့်မှန် ကြောင့် 27 နှစ်ပေါင်းလုလင်၏လုပ်အားခတောင်းဆိုမှုများမှယနေ့အထိကာယကံရှင်များနှင့်အတူရပ်တန်။
- လိဂ်တစ်ခုမှာ, Ipswich မြို့နှင့်ဆန်းဒါးလန်း၏နှစ်လုံးကိုတိုက်စစ်မှူးဟာ Aberdeen ၏လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်သင့်ပါတယ် Scott Wright ။ အဆိုပါအညီ နေ Ipswich ပြီးသား 22 နှစ်ကစားသမားအတွက်ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုပယ်ချခဲ့သည်။ အလှူငွေ 500 000 £အကြောင်းကိုကုန်ကျစရိတ်ရှာဖွေနေမည်ဖြစ်သည်။  ။
ဤဆောင်းပါးတွင်ပထမဦးဆုံးပေါ် (အင်္ဂလိပ်လို) သည်ထင်ရှား http://espn.com/soccer/blog-transfer-talk/story/3928034/transfer-talk-psg-plan-shock-move-for-zaha